Naijeriya - ALinks
Yakanakisisa Makunivhesiti muNigeria
December 15, 2020 Maitri Jha Naijeriya, kudzidza
Nigeria ine mazhinji eruzhinji uye akazvimirira masangano. Sekureva kwemushumo weUNISA, kune mayunivhesiti zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri muNigeria. Mari dzegore rega dzemayunivhesiti eruzhinji dzinenge dzakatenderedza $ 162- $ 125. Zvisinei, Masunivhesiti akazvimirira anodhura avhareji yemadhora 500 pagore. Naijeriya
Visa Chikumbiro Maitiro weNigeria
September 13, 2020 Antika Kumari Naijeriya, vhiza
Maitiro eVisa eNigeria akareruka kwazvo. Maitiro eNigerian visa kunyorera iko zvino kwave kuitwa online. Kune zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva usati wanyorera vhiza, sezvo kune dzimwe nyika dzine vagari vayo
Yekufambisa System muNigeria !!
Dai 17, 2020 Shubham Sharma tenderera, Naijeriya
Kufambisa muNigeria kune nzira ina dzese. Ruzhinji rwevanhu vanovimba nemugwagwa kune network kune yavo yekufambisa. Vanopfuura 80% yevagari vanoshandisa chete migwagwa yekufambisa. Nigeria zvakare ine yakakura network
Mutengo Wokurarama muNigeria
December 6, 2019 Shubham Sharma mari, Naijeriya
Maresitorendi [Hora] Range Kudya, Isingadhuri Restaurant 500.00 ₦ 362.30-1,000.00 Chikafu cheVanhu 2, Mid-renji Restaurant, Matatu-kosi 6,000.00 ₦ 3,500.00-12,000.00 McMeal kuMcDonalds (kana Yakaenzana Combo Kudya) 1,600.00 ₦ 1,450.00-2,500.00 Domestic Beer (0.5 litre dhizaini) 300.00 ₦ 250.00-500.00 Kunze Bhegi (0.33 litita bhodhoro)
Shopping Mall MuNigeria
December 6, 2019 Karuna Chandna Naijeriya, zvinhu zvekuita
Tinapa Shopping Resort Tinapa Shopping Resort inzvimbo hombe yezvitoro, ine nzvimbo yakazara yekutengesa inofukidza inosvika mazana matanhatu nemakumi matanhatu emamirita emamirita, zvichiiita kuti ive yakakurisa yezvitoro muNigeria, uye pakati peiyo yakakura muAfrica. Iyo yekutengesa mall iri mukati
Pamusoro mashanu Mahotera
December 6, 2019 Antika Kumari Hotels, Naijeriya
1. FEDERAL PALACE HOTEL LAGOS: Inozivikanwa seimwe yeakanakisa uye ekare mashanu mahotera emahotera muLagos, Federal Palace Hotel inopa yakanakira kunyaradza kune vese vafambi vebhizinesi nevashanyi vekutandarira zvakafanana. Zvisinei nezera rayo, hotera ndeyechizvino uye
YAKABUDA NGUVA KUTI Uende kuNigERIA
December 6, 2019 Shubham Sharma Naijeriya, famba
Nguva yakanaka yekuenda kuNigeria iri mumwaka weNov-Jan wakaoma mwaka. Ino inyika yakakura, zvakadaro, uye mamiriro ekunze anosiyana zvikuru nehurefu pamwe nehurefu; iyo yakaoma Sahel kuchamhembe inoona kushoma kunaya kwemvura, kutanga
Yakawanda Sei Rwendo rwekuenda kuNigeria Kuchaita?
Sekushanya kwemushanyi, mutengo wepakati werwendo rwemazuva manomwe kuNigeria unodhura $ 7. Nekudaro, rwendo rwemhuri runodhura $ 1,722. Mahotera muNigeria anotangira pamadhora makumi maviri nemanomwe kusvika pamadhora zana nemakumi masere nemana nehusiku Asi, yedzimba dzese dzekurendesa zororo,
Mabhonzo Esepamusoro muNigeria
November 29, 2019 Shubham Sharma mari, Naijeriya
Mabhangi eNigeria anodzikisira mabasa emari kuti vabatsire vatengi vavo uye zvakare kukwezva zvimwe. Aya mabhizimusi ekutengesa ane marezinesi ekushandisa neCentral Bank yeNigeria (CBN) haana kungochengetedza mukurumbira wakasimba munzvimbo dzemumabhangi.
Nzvimbo Dzakanakisisa dzeVashanyi Vanoshanyira MuNigeria !!
November 29, 2019 Shubham Sharma Naijeriya, zvinhu zvekuita
Nigeria ndeimwe yenyika dzepasi dzakaropafadzwa nehunyanzvi hwekushanya. Muchokwadi, kushanya ndechimwe chezvinhu zvikuru zvinowanikwa mari muNigeria. Izvo zvinosuruvarisa kuti vazhinji veNigeria varikushayikwa